မိုးကောင်းငှက် - ဝီကီပီးဒီးယား
Coracias orientalis လင်းနီးယပ်၊ ၁၇၆၆
မိုးကောင်းငှက် (Oriental Dollarbird) သည် ငှက်ခါးကဲ့သို့ပင် "ကိုရာဆိင် အီဒီး" မျိုးရင်းတွင်ပါဝင်၍ ပါဏဗေဒ အလိုအားဖြင့် "ယူရစ်စတိုးမတ် အိုရီယင့်တားလစ် (Eurystomus orientalis)" ဟု ခေါ်သည်။ ငှက်ခါးနှင့် မျိုးတူဖြစ်သော်လည်း ငှက်ခါးလောက် လူသိမများချေ။ အလျား ၁၂ လက်မရှိသည်။ ပျံသန်းသည့်အခါ တောင်ပံ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် အဖြူကွက်ကြီး တစ်ခုစီကိုမြင်နိုင်သည်။
နားနေသည့်အခါတွင် မိုးကောင်းငှက်၏ မည်းခြောက်ခြောက် အရောင်နှင့် နီရဲသော နှုတ်သီးကို ထင်ရှားစွာမြင်နိုင်သည်။ မိုးကောင်းငှက်သည် ငှက်ခါးကဲ့သို့ သစ်ပင်ကျိုးတိုး ကျဲတဲမျှရှိသည့် ကွင်းပြင်၌ကျက်စားသော ငှက်မျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ တောတွင်းငှက် စစ်စစ်ဖြစ်၍ ကျွန်းတောများတွင် အများဆုံးတွေ့ရသည်။ သစ်ပင်ခြောက်ထိပ်ဖျားပေါ်တွင် နားနေလေ့ရှိ၍ နေ့လယ်နေ့ခင်းပူချိန်တွင် ဦးခေါင်းကို ရင်အုပ်နှင့်ပခုံးရှိ အမွှေးများကြားတွင် ဖုံးဝှက်ကာ မလှုပ်မယှက်နေတတ်သည်။ ငှက်ခါးကဲ့သို့ ပူပြင်းသောနေရောင်အောက်တွင် ကြာရှည်စွာနေနိုင်သည်။ သာမန်အားဖြင့် ပျင်းရိလေးကန်သော်လည်း စိတ်တက်ကြွလာသည့်အခါ လျင်မြန်ဖျတ်လတ်လေသည်။ ပျံနေသော ပိုးကောင်များကို လင်းမြီးဆွဲများနှင့်အတူ လိုက်လံဖမ်းယူစားသောက်တတ်သည်။ သစ်စားပိုး၊ ပုစဉ်းရင်ကွဲ၊ နှံကောင် စသည်တို့သည် မိုးကောင်းငှက်၏ အစာများဖြစ်ကြသည်။
မိုးကောင်းငှက်သည် စူးရှသော အသံဖြင့် မကြာမကြာအော်လေ့ရှိသည်။ ငှက်ခါးလောက် မဆူညံချေ။ သို့သော် သားပေါက်ချိန်တွင်ကား ငှက်ခါးကဲ့သို့ဆူညံ၏။ မတ်လမှ မေလအထိ မိုးကောင်းငှက်များ သားပေါက်ကြသည်။ အသိုက်လုပ်လေ့မရှိဘဲ မြင့်သော သစ်ပင်အခေါင်းထဲတွင် အုလေ့ရှိသည်။ တမြုံလျှင် ၃ ဥ မှ ၄ ဥအထိ ရှိသည်။
မိုးကောင်းငှက်ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် အာရှတိုက် အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ နိုင်ငံများမှ ဩစတြေးလျတိုက်အထိနှင့် အနောက်ဘက်တွင် ဟိမဝန္တာ တောင်တန်းဒေသအလယ်ပိုင်းအထိ တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ခြေသစ်တောများတွင် အနှံ့အပြားတွေ့ရသည်။ မြင့်မားသော တောင်များပေါ်၌ တွေ့ရခဲသည်။ သို့သော် ပဲခူးရိုးမ အချို့နေရာများတွင်ကား မိုးကောင်းငှက်တို့ကို ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရလေသည်။
↑ BirdLife International (2016). "Eurystomus orientalis". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22682920A92968881.en.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မိုးကောင်းငှက်&oldid=721568" မှ ရယူရန်
ဆော်လမွန်အိုင်းလန်းနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသော ငှက်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။